Sidee Bilaabayaashu Uga Gudbi Karaan Caqabadaha Tignoolajiyada Suuqgeynta Guud | Martech Zone
Erayga "bilawga" waa mid soo jiidasho leh indhaha dad badan. Waxay kicisaa sawirada maalgashadayaasha xiisaynaya oo eryanaya fikrado milyan-dollar ah, goobo xafiisyo qurxoon, iyo korriin aan xadidnayn.
Laakin xirfadlayaasha teknoolajiyadu waxay ogyihiin xaqiiqada soo jiidashada yar ee ka dambeysa khiyaaliga bilowga: kaliya helitaanka cag ee suuqa waa buuro aad u weyn oo la fuulo.
At GetApp, waxaanu ka caawinaa kuwa bilowga ah iyo ganacsiyada kale inay helaan software-ka ay u baahan yihiin si ay u koraan oo ay u gaadhaan hadafkooda maalin kasta, waxaanan baranay waxyaabo yar oo ku saabsan caqabadaha kobaca ganacsiga iyo xalalka wadada.
Si aan u caawino kuwa bilawga ah gaar ahaan, waxaan dhawaan la midownay Shiidi bilawga - bulshada ugu weyn ee online-ka ah ee bilawga ah - si loo ogaado caqabadaha farsamo ee ugu daran ee hogaamiyaasha bilowga ah. Halgankii aan inta badan ka maqalnay hoggaamiyeyaashan waxay ahaayeen dhisidda joogitaan wax ku ool ah oo internetka ah iyo helitaanka software xallinaya dhibaatooyinka la aqoonsaday.
Markaa sida bilawga leh kheyraad xaddidan, sidee lagu ogaan karaa internetka markaad hesho tignoolajiyada saxda ah, dhammaan adiga oo aan khasaarin kheyraadka qaaliga ah?
Jawaabtu waa dhisitaanka tignoolajiyada suuqgeynta wax ku ool ah (martech), iyo xaga GetApp waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad sidaas sameyso. Waa kuwan saddexda talo ee kaa caawinaya inaad saadaaliso oo aad ka gudubto caqabadaha caanka ah ee martech.
Talada 1: Ma doonaysaa in Martech-gaagu noqdo mid waxtar leh? Adiga u baahan in la sameeyo qorshe
Markii aan la hadlaynay hoggaamiyeyaasha bilawga ah, waxaan ogaanay taas ku dhowaad 70%1 waxay mar hore ka faa'iideysanayaan qalabka martech. Kuwa aan ka faa'iidaysanina ma aha kuwo aan waxba tarayn; in ka badan kala badh isticmaalayaasha aan-martech-ka ahayn ayaa ka helaya caawinaad suuq-geyneed hay'ad suuq-geyneed oo dibadda ah.
Laakiin waa maxay qorshahooda ciyaarta?
Markii aan waydiinay kuwa bilawga ah ee isticmaalaya qalabka martech haddii ay leeyihiin qorshe oo ay raacayaan, in ka badan 40% waxay sheegeen inay baal ka yihiin.
Tani waxay caqabad weyn ku tahay in la gaaro xirmo martech ah oo wax ku ool ah. GetAppSahanka bilawga ah ayaa lagu ogaaday kuwa bilawga ah ee aan lahayn qorshaha martech waxay in ka badan afar jeer u badan tahay inay sheegaan in tignoolajiyada suuqgeyntu aanay buuxin ujeeddooyinkooda ganacsi.
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad gaarto yoolalkaaga ganacsi, natiijadii sahankayaduna waxay rinjiyeen khariidad cad oo cad oo aad halkaas ku gaadhayso: Samee qorshe martech oo ku dheggan.
Tallaabooyinka xiga: Ururi koox qorshayneed oo wakiilo ah oo ka kala socda ururkaaga oo dhan, ka dib jadwal u samee kulan bilow ah si aad u go'aamiso agabka cusub ee aad u baahan tahay oo ay la socoto jadwal aad ku fulinayso. Ku dar tilaabo qorshahaaga ah si aad si joogto ah u baadho agab suuqgeyneed oo jira si aad u hubiso inay wali kaa caawinayaan inaad gaadho ujeedooyinka ganacsiga. La wadaag qorshahaaga dhammaan daneeyayaasha, oo dib u eeg oo hagaaji sida loo baahdo.
Talada 2: Hubaal, qalabka Martech waxay noqon karaan kuwo xad dhaaf ah, laakiin waxaa jirta waddo loo maro guusha iyo ka-qaybgalka la wanaajiyay ayaa mudan dadaalka
Software-ka suuqgeyntu wuxuu si cajiib ah u awood badan yahay gacanta koox khibrad leh, laakiin tirada astaamaha iyo awoodaha la socda casriga tikniyoolajiyadda suuqgeynta sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad u adag isticmaalayaasha cusub.
Hogaamiyayaasha bilawga ah ee aan la hadalnay waxay soo xiganayeen xad-dhaaf ah oo aan la isticmaalin iyo sifooyin is dulsaaran waxayna ka faalloodeen kakanaanta guud ee qalabka martech sida qaar ka mid ah caqabadaha ugu sareeya ee farsamada.
Dhanka kale, faa'iidooyinka qalabkan ayaa si fiican u qalma caqabadaha. Hogaamiyayaashan isla bilawga ah waxay taxay ka qaybgalka macaamiisha ee la wanaajiyay, beegsiga saxda ah, iyo ololayaasha suuqgeyneed ee waxtarka leh sida saddexda faa'iido ee ugu sarreeya kaydka martech.
Haddaba, sidee ayaad ugu raaxaysan kartaa faa'iidooyinka tignoolajiyada suuq-geyneed adigoo yareynaya niyad-jabka iyo dib-u-dhacyada xad-dhaafka ah ee muujinta? Hogaamiye shirkad tignoolajiyadeed ahaan, waxaan kuu sheegi karaa in xisaab xidhka martech ay tahay meel fiican oo laga bilaabo.
Qaar ka mid ah tababbarka dheeraadka ah ee isticmaalayaasha dhammaadka ah ayaa sidoo kale wax weyn ka tari kara hoos-u-dhigga qalabkaaga martech. Iyo a qorshaha saxda ah ee martech waa in ay kaa caawiyaan in aad ka baxdo arrimahan qaarkood marka la dhaafo adiga oo dooranaya qalab ku habboon oo adag marka hore.
Hogaamiyayaasha bilawga ah ee aanu xog-ururinay ayaa sidoo kale bixiyay xoogaa jawaab celin ah oo ku saabsan sida ay uga jawaabayaan caqabadahan martech. Aragtidooda ku salaysan waayo-aragnimada ayaa kaa caawin karta inaad sameyso qorshahaaga jawaab celinta, haddii aad la kulanto caqabado la mid ah:
Tallaabooyinka xiga: Uruuri dukumeentiyada habsocodka tignoolajiyadaada suuqgeynta cusub (ama lagu sameeyay guriga ama uu bixiyo iibiyahaaga) oo la wadaag dhammaan isticmaalayaasha dhamaadka. Jadwal u samee fadhiyada tababarka caadiga ah (labadaba ay shaqaaluhu hogaaminayaan iyo iibiyuhu bixiyo) oo u qoondee isticmaalayaasha sare si ay u xaliyaan una hogaamiyaan aqoon-isweydaarsiyada. Samee kanaal qalabkaaga wada shaqayneed halkaas oo isticmaalayaashu ay ku waydiin karaan su'aalo oo ay ka heli karaan caawimaad qalabkaaga martech.
Talada 3: Haddii aad rabto inaad guulaysato, dhig ugu yaraan 25% miisaaniyadaada suuqgeyneed ee maalgashiga Martech
Markaad qorshaynayso istaraatiijiyadaada martech, waa muhiim inaad go'aamiso miisaaniyad macquul ah oo aad ku dhegto. Iyadoo la dhimayo kharashaadka martech si loo badbaadiyo miisaaniyada waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh, iska dhaafidu waxay gelin kartaa ganacsigaaga curdinka ah khatarta ah inuu dib u dhaco oo uu istaago. Tani waa sababta ay u barbar dhigista asaagaa u noqon karto mid waxtar leh.
Tixgeli in 65% kuwa bilawga ah ee aan ka maqalnay in ay ku bixiyaan in ka badan rubuc miisaaniyadooda suuqgeyneed ee martech ay sheegeen in xirmooyinkoodu ay buuxinayaan ujeedooyinka ganacsiga, halka in ka yar kala badh (46%) kuwa kharashgareeya wax ka yar 25% ay samayn karaan isla sidaas. sheegasho.
Keliya 13% ka mid ah jawaab bixiyaashayada ayaa wax ka badan 40% miisaaniyadooda ku bixiya martech. Iyada oo ku saleysan macluumaadkan, u go'aaminta meel u dhaxaysa 25% iyo 40% ee miisaaniyadaada suuq-geyneed ee suuq-geynta martech waa hab macquul ah, illaa iyo inta ay khusayso qiimaynta asaaga.
Miisaaniyadda bilawga ah aad ayey u kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran xajmiga ganacsiga, laakiin halkan waxaa ah xog yar oo sahamin ah oo ku saabsan waxa asxaabtaada ay dhab ahaantii ku qarashgareynayaan martech:
45% kuwa bilowga ah waxay kharash gareeyaan $1,001 – $10,000/bishii
<20% kuwa bilawga ah waxay kharash gareeyaan $10,000+ bishii
38% kuwa bilowga ah waxay kharash gareeyaan wax ka yar $1,000/bishii
56% kuwa bilowga ah waxay soo sheegaan iyagoo isticmaalaya nooc ka mid ah software suuqgeyn bilaash ah/qalab suuqgeyn bilaash ah
Si cadaalad ah loo hadlo, masiibada COVID-19 waxay burburisay miisaaniyada dhammaan waaxyaha oo dhan. Laakiin waxaan ogaanay in xitaa weli, 63% hogaamiyayaasha bilowga ah waxay kordhiyeen maalgashigooda martech sanadkii la soo dhaafay. In ka yar boqolkiiba shan ayaa hoos u dhacay miisaaniyadooda ganacsiga isla muddadaas.
Tallaabooyinka xiga: Kadib markaad dejiso miisaaniyadaada, tijaabi dhowr Qalab bilaash ah / tijaabo bilaash ah si aad u aragto waxa si fiican ugu shaqeeya kooxdaada. Ma la yaaban tahay agabka martech-ka lagu bilaabo? Sahankayaga ayaa shaaca ka qaaday in tijaabada A/B, falanqaynta webka, iyo software CRM ay ahaayeen aaladaha ugu waxtarka badan ee caawinta bilawga ah inay gaaraan yoolalka suuqgeynta.
Download GetAppDhisidda Xirmada Martech ee Muhiimka ah ee Hagaha Bilowga
4 Tallaabo si aad u wanaajiso Martech Stack kaaga
Bilaw ahaan, kaliya gaarista baaxadda muhiimka ah waa guul weyn, iyo qorshe suuqgeyneed oo wanaagsan iyo xirmo martech ah oo wax ku ool ah ayaa muhiim u ah helitaanka halkaas. Waa kuwan qorshe afar tallaabo ah oo aad ku qaadanayso talada halkan lagugula wadaago:
Samee qorshe Martech: Ururi kooxdaada, go'aanso qalabka aad u baahan tahay, samee qorshe fulin iyo wakhti, oo la wadaag ururkaaga. Dib u eeg si joogto ah una hagaaji sida loo baahdo.
U dhig kooxdaada guul: Sii kooxdaada dukumentiyada nidaamka, agabka wada shaqaynta, iyo shaqaalaha-iyo tababarada ay hogaamiyaan iibiyuhu si looga caawiyo inay u isticmaalaan kaydkaaga martech sida ugu macquulsan.
Samee miisaaniyad macquul ah oo ku adkeyso: Haddii aad wax ka yar 25% miisaaniyada suuq-geyneed ku bixinayso tignoolajiyada, waxaad halis ugu jirtaa inaad dib uga dhacdo tartamayaashaada. Xusuusnow inay sidoo kale OK tahay in lagu daro qalabka bilaashka ah ee kaydkaaga martech ilaa inta ay waxtar leeyihiin.
Xisaabi kaydkaaga martech: Si joogto ah (ugu yaraan laba jeer sannadkii) xisaabi khariidadahaaga martech iyo isticmaalayaasha ra'yi ururinta si aad u hubiso in qalabkaagu wali caawinayo fulinta dadaallada suuqgeyneed. Tirtir qalabka aan la isticmaalin oo isku dar kuwa leh sifooyin is dulsaaran. Tijaabi qalab cusub (adoo isticmaalaya tijaabooyin bilaash ah marka ay suurtogal tahay) si wax looga qabto baahiyaha aan la buuxin.
Nasiib wacan, waanu kuu xididaynaa. Laakiin waxaan rajeyneynaa inaan sameyn karno wax ka badan oo aan kaliya ku farxin oo kaliya inaad ka soo baxdo. Waxaan abuurnay tiro qalab iyo adeegyo bilaash ah si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto yoolalkaaga bilowga, oo ay ku jiraan kuwayada Qalabka AppFinder iyo annaga Hogaamiyayaasha Qaybta ku saleysan in ka badan hal milyan oo isticmaale oo la xaqiijiyay.
Eeg iyaga, iyo Aan ogaano Haddii ay jiraan wax kale oo dheeraad ah waxaan sameyn karnaa si aan kuu caawino inta aad jidka ku jirto.
1GetAppSahanka Tignoolajiyada Suuqgeynta ee 2021 waxa la sameeyay Feebarwari 18-25, 2021 ka mid ah 238 jawaab bixiye si ay wax badan uga bartaan adeegsiga agabka tignoolajiyada suuqgeynta ee bilawga. Jawaab bixiyaasha ayaa laga baadhay jagooyinka hogaaminta ee bilawga daryeelka caafimaadka, adeegyada IT, suuq geynta/CRM, tafaariiqda/ecommerce, software/samaynta shabakada, ama AI/ML.
GetAppSu'aasha waxtarka leh ee tignoolajiyada suuq geynta waxaa ka mid ahaa dhammaan xulashooyinka soo socda (halkan ku taxan sida ay u kala horreeyaan waxtarka marka loo eego buundooyinka la miisaamay): A/B ama imtixaannada kala duwan, falanqaynta shabakadda, maaraynta xidhiidhka macaamiisha (CRM), sifo taabasho badan, warbaahinta bulshada suuqgeyn, madal suuqgeyneed, moobilada suuqgeynta, aaladaha website-dhisaha, madal xogta macaamiisha (CDP), suuq-geynta raadinta (SEO/SEM), madal shakhsiyaynta, oggolaanshaha iyo maamulka doorbidida, softiweer suuq-geyneed, madal khibrad sahamin/macmiil, nidaamka maaraynta nuxurka (CMS) Suuqgeynta multichannel, madal suuqgeyn email ah, xayaysiis muuqaal online ah, qalab u doodista shaqaalaha.
Tags: Sahanka Tignoolajiyada Suuqgeynta 2021appfindertijaabooyinka qalabka suuq-geynta bilaashka ahqalabka suuqgeynta bilaashka ahmiisaaniyadda suuqgeyntaraso suuq geyntatikniyoolajiyadda suuqgeyntahirgelinta martechqorshaha martechxidhmooyinhantidhawrka raso martechmiisaaniyad xidhmo martechbilowga miisaaniyada martechxawaaladaha martech xirmo